N'ogbe Ohia Bulldozer Nsukka na Suppliers, Factory Quotes | Xuanhua
Tag Archives: Oke ohia Bulldozer
TY320-3 bulldozer bụ kwụsịtụrụ isiike, na-enyefe hydraulic, ụdị ụgbọelu na-achịkwa hydraulic. Mbara ala, nnyefe ikike nnyefe nke bụ Unilever arụ ọrụ. Sistemụ arụmọrụ eji arụ ọrụ dịka mmadụ na igwe na-arụ ọrụ na-eme ka ọrụ dị mfe, rụọ ọrụ nke ọma na n'ụzọ ziri ezi.
TY230-3 bulldozer bụ kwụsịtụrụ isiike, na-enyefe hydraulic, ụdị ụgbọelu na-achịkwa hydraulic. Mbara ala, nnyefe ikike nnyefe nke bụ Unilever arụ ọrụ. Sistemụ arụmọrụ eji arụ ọrụ dịka mmadụ na igwe na-arụ ọrụ na-eme ka ọrụ dị mfe, rụọ ọrụ nke ọma na n'ụzọ ziri ezi.
T160-3F bulldozer bụ nkwụsịtụ nke siri ike, nnyefe ụgbọala na-ebugharị, ụdị ụzọ ụgbọ ala, nke a na-eji arụ okporo ụzọ, na-egbu osisi n'ime oke ohia, yana atụmatụ nke ezigbo ọhụụ, arụmọrụ dị elu, arụmọrụ mmezi dị ala.
Ọ nwere njirimara nke nkwusioru nke isii, akụrụngwa igwe. Isi ipigide asat. nlekota oru eletrik, ọdịdị dị mma, a na-ejikarị ya arụ ụlọ, ọrụ ugbo na ihe ndị ọzọ.
SD6KLGP katapila kwadebere n'ụzọ na taya III electronic akara engine, haịdrọlik mgbapụta na moto, atọ nkebi planetary ọsọ Mbelata, centralize4d jụrụ usoro, electric nkezi njikwa nnyefe na pilot haịdrọlik akara. Bulldozer SD6KLGP nwere ezigbo ike ...
SD5K bụ ụdị-ụdị ngụkọta haịdrọlik klọọkụ na isiike isiike kwụsịtụrụ, kọmputa akara EBIONITISM, sọrọ-na-na-na-elektrọnik akara hydrostatic ịnya ụgbọ ala usoro, electric akara mechiri emechi center ibu na-eziga mejuputa haịdrọlik usoro.
SD7LGP katapila bụ 230 horsepower track-ụdị dozer na elu sprocket, ike nnofega mbanye, ọkara-isiike kwụsịtụrụ na haịdrọlik njikwa. SD7LGP-230 horsepower, elu sprocket bulldozer iwekota na modular imewe dị mfe ịrụzi & mmezi, Ọ na-egbochi mmanụ na ọdịiche mgbali ...